Perikopa FJKM alahady 22 Septambra 2013 | FJKM Amboniloha
Perikopa FJKM alahady 22 Septambra 2013
9 Koa noho ny herin’ireny dia hiandry Anao aho; fa Andriamanitra no fiarovana avo ho ahy.
10 Andriamanitra, Izay mamindra fo amiko, no hialoha ahy; hataon’Andriamanitra faly mijery ny amin’ny fahavaloko aho.
11 Aza mahafaty azy Hianao, fandrao hanadino izany ny fireneko. Ampirenireneo amin’ny herinao izy, ka aripaho, ry Tompo ô, Ampinganay.
12 Ny fahotan’ny vavany dia ny tenin’ny molony; aoka hosamborina amin’ny fireharehany izy, eny, noho ny ozona sy ny lainga ataony.
13 Aringano an-katezerana izy, aringano mba tsy ho ao intsony; ary aoka ho fantany fa Andriamanitra no manapaka eo amin’ny Jakoba ka hatramin’ny faran’ny tany.
14 Ary miverina nony hariva ireny ka mierona tahaka ny alika, sady mandehandeha eran’ny tanàna.
15 Miriorio mitady hanina izy; raha tsy voky izy, dia any ihany mandritra ny alina.
16 Fa izaho kosa dia hihira ny herinao, ary hihoby ny famindram-ponao nony maraina, satria fiarovana avo ho ahy Hianao, ary fandosirako amin’ny andro fahoriana.
17 Ry Heriko ô, Hianao no hankalazaiko; fa Andriamanitra no fiarovana avo ho ahy, dia Andriamanitra Izay mamindra fo amiko.
66 Hatramin’izany* dia maro tamin’ny mpianany no nihemotra ka tsy niara-nandeha taminy intsony. [*Na: Noho izany]
67 Dia hoy Jesosy tamin’ny roa ambin’ny folo lahy: Hianareo koa va mba te-hiala?
68 Simona Petera namaly Azy hoe: Tompo ô, hankany amin’iza moa izahay? Hianao no manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay.
69 Ary izahay mino ka mahalala fa Hianao no Ilay Masin’Andriamanitra.
70 Jesosy namaly azy hoe: Tsy Izaho va no nifidy anareo roa ambin’ny folo lahy, nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly?
71 Fa Izy nilaza an’i Jodasy, zanak’i Simona Iskariota; fa izy no ilay efa hamadika Azy, nefa isan’ny roa ambin’ny folo lahy.
7 [Filadelfia] Ary soraty ho amin’ny anjelin’ny fiangonana* any Filadelfia: Izao no lazain’izay masina, Izay marina, Izay manana ny fanalahidin’i Davida, Izay mamoha ka tsy hisy hanidy, ary manidy ka tsy misy mamoha: [* Gr. eklesia]
9 Indro, alaiko ny sasany amin’ny synagogan’i Satana, izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanjo tsy izy, fa mandainga, indro, hataoko tonga hiankohoka eo anoloan’ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa Izaho efa tia anao.
10 Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana ianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy izay efa hihatra amin’izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin’ny tany.
12 Izay maharesy no hataoko andry eo amin’ny tempolin’Andriamanitro, ary tsy hiala eo intsony izy; ary hosoratako eo aminy ny anaran’Andriamanitro sy ny anaran’ny tanànan’Andriamanitro, dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin’Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao.
13 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny fiangonana*. [* Gr. eklesia]